Ny rindranasa dimy tsara indrindra ho an'ny Android Wear and Wear OS | Androidsis
Eder Ferreño | | Fampiharana Android, SmartWatch
Mpampiasa maro no miloka amin'ny fividianana smartwatch androany. Ireo maodely ireo dia azo inoana fa manana Android Wear ho toy ny rafitra miasa, ary izao no nantsoina hoe Wear OS.. Nanjary iray amin'ireo vokatra malaza indrindra eny an-tsena izy ireo, ary manome safidy maro izahay. Ho fanampin'izay, afaka mahazo bebe kokoa amin'izy ireo isika amin'ny alàlan'ny fampiasana fampiharana.
Betsaka ny rindranasa izay mety amin'ny famataranay amin'ny Android Wear. Noho izany, etsy ambany dia avelanay anao miaraka amin'ny sasany amin'ireo fampiharana ireo. Noho izany, azonao atao ny manome ny famantaranandronao amin'ny fomba feno kokoa amin'ny fotoana rehetra. Vonona ny hianatra momba ireo rindranasa ireo?
Tsy misy fisalasalana mety ho fanampiana lehibe ho an'ireo mpampiasa manana famantaranandro amin'ny Android Wear na Wear OS amin'ny maha rafitra miasa azy. Na manompoa ny zavatra rehetra azonao atao amin'ny iray ho an'ireo mpampiasa mieritreritra ny hividy iray.
1 Ento! Lisitry ny fiantsenana
4 Mitafy OS
Ento! Lisitry ny fiantsenana
Fampiharana tena ilaina izany mamela antsika hanao ny lisitry ny fiantsenana amin'ny fomba tsotra sy voalamina tsara. Amin'izay dia tsy manadino na inona na inona isika amin'ny manaraka rehefa mandeha mividy zavatra. Izy io dia manana interface tsara, izay mifanentana tsara amin'ny famantaranandro. Azontsika atao koa ny mandamina ny zava-drehetra arakaraka ny sokajy na ny laharam-pahamehana. Ka mazava amintsika ny zavatra tsy maintsy vidintsika maika amin'ny manaraka.
Maimaimpoana ny fampidinana ity rindrambaiko ity. Ho fanampin'izay, tsy manana fividianana na dokam-barotra ao anatiny izahay.
Developer: Ento! Labs AG
Faharoa, mahita ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra ananantsika eo amin'ny tontolon'ny podcast isika. Ankoatry ny maha-iray amin'ireo vitsy azontsika ampiasaina amin'ny Android Wear. Amin'izay dia hahafahantsika mankafy podcast marobe isan-karazany amin'ny famantaranandrontsika isaky ny maniry. Ho fanampin'izany, manana fiasa fanampiny be dia be isika izay mahatonga azy io ho safidy feno tanteraka. Fampidinana mandeha ho azy, fanohanan'ny fiteny, fampifanarahana, afaka mamorona karazana playlist rehetra isika… Raha fintinina, safidy tena feno. Ho fanampin'izay, manana famolavolana be mpampiasa izy.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android Wear. Na dia mahita doka sy fividianana ao anatiny aza izahay. Mila mandoa vola ianao raha te hanana fidirana amin'ny podcast sasany.
Ny famantaranandro marani-tsaina dia safidy malaza indrindra amin'ny fivoahana hanao fanatanjahan-tena. Izy ireo no mifameno tsara satria manana asa maro izy ireo amin'izany. Na dia azontsika atao aza ny manatsara izany amin'ny alàlan'ny fampiharana sasany toa izao. Ity fampiharana ity dia hitazona ny asan'ny vatantsika amin'ny fotoana rehetra. Ho fanampin'izany, mamela antsika izy io mametraha tanjona ary manana fanohanana ho an'ireo mpampiasa mivoaka amin'ny bisikileta ihany koa izy io. Ka dia feno tokoa amin'ity lafiny ity. Izy io koa dia manana endrika tsara, izay mifanaraka tsara amin'ny famantaranandro amin'ny Android Wear.
Maimaimpoana ny fampidinana ity rindrambaiko ity. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
RunKeeper - Mandeha an-tongotra GPS
Android Wear dia hanome lalana tsikelikely an'i Wear OS, ilay rafitra fiasa nohavaozina ho an'ny famantaranandro marani-tsaina. Izahay dia efa manana ny fisian'ny fampiharana. Izy io dia fampiharana izay tena ilaina amin'ny mpampiasa. Satria amin'ny lafiny iray dia mila izany isika ampifanaraho amin'ny telefaona. Ho fanampin'izay, noho ny fampiharana izay ho azonay atao tantano tsara kokoa ny fiasa hafa toa ny Google Assistant na Google Fit. Noho izany dia zava-dehibe tokoa izy io raha ity kinova vaovao an'ny rafitra fiasa ity dia mahatratra famantaranandro bebe kokoa eny an-tsena.
Toy ny mahazatra amin'ny rindranasa Google, azontsika atao jereo fa misy maimaim-poana ary tsy misy karazana fividianana ao anatiny ao amin'ny Play Store.
Manaova OS amin'ny Google smartwatch
Izy io dia iray amin'ireo fampiharana vitsivitsy amin'ny fotoana izay manohana ny Android Wear 2.0. Safidy tsara tokony hodinihina ary azontsika apetraka amin'ny fiambenana. Fampiharana fanta-daza sy azo antoka ity izay manome antsika fampahalalana marobe momba ny toetr'andro amin'ny fotoana rehetra. Ka raha mila manana rindran-damina napetraka ianao dia io no safidy tsara indrindra.
Azo alaina maimaim-poana ny fangatahana. Na dia mahita fividianana sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay.
AccuWeather: Fanairana momba ny toetrandro sy toetrandro
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android Wear and Wear OS
Ny lalao 3D tsara indrindra ho an'ny Android
Ireo fangatahana fandoavam-bola amin'ny finday misy any Espana